Ireo mpanamboatra sy mpamatsy fitsapana haingana an'i China FOB | Liming Bio
The StrongStep®FOB Rapid Test Strip (Feces) dia immunoassay haingana amin'ny fahitana mialoha ny hemoglobin'olombelona amin'ny karazan'olombelona. Ity kit ity dia natao hampiasaina ho fanampiana amin'ny fitiliana ny aretin'ny gastrointestinal (gi) ambany.
Ny homamiadan'ny colectectal dia iray amin'ireo homamiadana hita matetika ary antony iray mahatonga ny fahafatesan'ny homamiadana any Etazonia. Ny fitiliana ny homamiadan'ny lokony dia mety hampitombo ny detection cancer amin'ny dingana voalohany, noho izany dia mampihena ny fahafatesan'ny olona.
Ny fanandramana FOB teo aloha dia nampiasa ny fitsapana guaiac, izay mitaky fameperana manokana ny sakafo mba hampihenana ny valiny ratsy ratsy sy ratsy. Ny FOB Rapid Test Strip (Feces) dia natao manokana hamantarana hemôglôbinin'olombelona amin'ny santionan'ny poti amin'ny alàlan'ny fomba Immunochemical, izay nanatsara ny famaritana ny gastrointestinal ambany. korontana, ao anatin'izany ny homamiadan'ny lokony sy ny adenomas.
Ny FOB Rapid Test Strip (Feces) dia natao hamantarana ny hemôglôbinin'olombelona amin'ny alàlan'ny fandikana an-tsary ny fivoaran'ny loko ao amin'ny tsipika anatiny. Ny fonosana dia tsy azo nihetsika niaraka tamin'ny anti-hemôglôbinin'olombelona hemoglobinin'ny faritra fitsapana. Nandritra ny fitsapana, ny santionany dia avela hihetsika amin'ny anti-olombelona hemôglôbinin'olombelona anti-olombelona conjugates colloidal colloidal, izay precoated amin'ny santionan'ny pad ny andrana. Avy eo ny fifangaroana dia mivezivezy amin'ny membrane amin'ny alàlan'ny hetsika capillary, ary mifandray amin'ny reagents amin'ny membrane. Raha ampy ny hemôglôbinin'olombelona amin'ny santionany, dia misy tarika miloko miforona eo amin'ny faritra fitsapana ny membrane. Ny fisian'ity tarika miloko ity dia manondro vokatra tsara, raha toa kosa ny tsy fisiany dia manondro vokatra ratsy. Ny fisehoan'ny tarika miloko amin'ny faritra fanaraha-maso dia toy ny fifehezana ny fomba fiasa. Midika izany fa nanampy ny habetsaky ny santionany ary ny famonoana ny membrane.
■ Ho an'ny fampiasana diagnostika in vitro ihany.
■ Aza ampiasaina aorian'ny daty lany daty voalaza ao amin'ny fonosana. Aza mampiasa ny fitsapana raha simba ny paosy foil. Aza ampiasaina indray ny fitsapana.
■ Ity kit ity dia misy vokatra niavian'ny biby. Ny fahalalana voamarina momba ny niandohana sy / na ny fidiovan'ny biby dia tsy manome antoka tanteraka ny tsy fisian'ny agents pathogenic azo ampitaina. Noho izany dia nanolorana azy ireo ho toy ny areti-mifindra ireto vokatra ireto ary arahi-maso amin'ny fomba fitandremana ny fiarovana mahazatra (ohatra: tsy mihinana na mifoka).
■ Sorohy ny fandotoana ny santionany amin'ny alàlan'ny fampiasana fitoeram-panangonana santionany vaovao isaky ny santionany azo.
■ Vakio tsara ny fomba rehetra alohan'ny fitsapana.
■ Aza mihinana, misotro na mifoka amin'ny faritra rehetra itondrana ny santionany sy ny kitany. Tantano ny specimen rehetra toy ny hoe misy otrikaretina mifindra izy ireo. Tandremo ny fepetra mialoha napetraka manoloana ny loza mitatao amin'ny microbiolojika mandritra ny fomba fanao ary araho ny fomba fanao mahazatra amin'ny famoahana santionany. Manaova akanjo miaro toy ny palitao any amin'ny laboratoara, fonon-tànana azo ampiasaina ary arovana ny maso rehefa voasedra ny santionany.
■ Ny buffer dilution specimen dia misy azide sodium, izay mety hihetsika amin'ny plastika na plastika varahina mba hamoronana azida metaly mety hipoaka. Rehefa manary buffer dilution specimen na santionany nalaina dia manaova rano be dia be foana hisorohana ny fananganana azide.
■ Aza mifanakalo na mifangaro reagents amin'ny antsapaka samihafa.
■ Misy vokany ratsy eo amin'ny vokatra ny hamandoana sy ny maripana.
■ Ireo fitaovana fanandramana efa nampiasaina dia tokony ariana araky ny lalàna eo an-toerana.
Manaraka: Vahaolana fandokoana fluoresensa
Fob fitaovana fitsapana haingana
H. Pylori Ag Rapid Test dia mamantatra ny antigen, Vibrio Cholerae O1 / O139 Antigen Combo Fitsapana haingana, Kitapo fitsapana Igm / Iggrapid, Fitsapana haingana momba ny Coronavirus Ket, Coronavirus ho an'ny fitsapana Covid-19, Kitapo fitsapana antigona Coronavirus,